ညီလင်းသစ်: မြန်မာစကားသည် တို့စကား
Posted by ညီလင်းသစ် au 8.9.14
မောင်ညီလင်းရေးခဲ့တဲ့"မြန်မာလူမျိုး အဖေတယောက်ရဲ့ နှုတ်က သူ့သားအတွက် ထွက်လာမယ့်စကားဟာ မြန်မာစကားပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ကျနော့်အတွက်တော့ နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားစရာတောင် မလိုတဲ့ သေချာမှုပါပဲ" တီတင့်လေးစား အားကျမိတာတွေထဲက တစ်ချက်ပေါ့ကွယ်... ဒီပို့စ်လေးကို တီတင့်ညီမလေးကို ဖတ်ခိုင်းရမယ် ...
My boy is 2.5 years old only and we talk Myanmar language exclusively at home. :) When he started his child care at2years old, he was struggling with English and Chinese at school. The teacher extended her help to learn some basic myanmar language from me to ease his separation anxiety. I really appreciate her help. Now, he knows when to switch languages to different people. Your post remind me that experience. Thank you brother. :)
Oops. Sorry. I already shared it to my FB and I informed it to you. :D
I hope you don't mind it. :)
I am impressed both thar thar and you.
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို :)
အစ်ကိုက တကယ်ဖခင်တာဝန်ကျေပွန်ပါတယ်..လေးလဲလေးစားတယ်..။ ဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေအများစု သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထားတယ် မြန်မာလိုမရေးတတ် မဖတ်တတ်ကြဘူး..။ အဲလိုကြားရတော့ တကယ်အံ့သြမိတယ် မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာစာမတတ်ဘူးဆိုတော့လေ..။ ဒီပို့စ်ဟာ မြန်မာလိုမရေးတတ် မဖတ်တတ်တာ တော်တော်များလာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့မိဘအတွက် တကယ့်ကိုသိသင့်သိထိုက်တဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ...။
Please let me share on my FB.
ဒီလိုအတွေးမျိုးမြန်မာမိဘတိုင်းမှာရှိရင်သိပ် ကောင်း မှာနော်။
မြန်မာဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုညီရဲ့ အားထုတ်မှုကို အသ်ိအမှတ် မပြုပဲ မနေနိုင်ပါဘူး ကိုညီရေ။ စစချင်းအပိုဒ်ရဲ့အဆုံးက “ ကွဲပြားမှုတွေ အတူယှဉ်တွဲ ရှိနေတဲ့အကြောင်း အခုအရွယ်ကတည်းက နားလည်စေမှာဖြစ်သလို အခြား ဘာသာစကားတွေကိုလည်း လေးစား၊ တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ ပါပဲ…၊ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးက တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ။ မိသားစု စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
အစ်ကိုက အရမ်းတော်တာပဲ လေးစားတယ်
ကျမသား ကျနော့် သား ၊ သမီးက အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောတတ်တော့တာ မြန်မာလိုမပြောတတ်တော့ဘူးလို့ ဂုဏ်ယူသံနဲ့ပြောတဲ့ မိဘနဲ့ တစ်ခြားဆီပဲ မြင်ဖူးတယ် ဒီမှာလည်း မြန်မာလိုပြောရမှာရှက်တဲ့ ခလေး မြန်မာလို မပြောစေချင်တဲ့မိဘ ။
ဘာသာစကားတိုင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါကြီးပါပဲ နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာစာ စကားကို လေ့လာနေကြတဲ့အချိန် မြန်မာလေးတွေက မပြောချင်တော့တာကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ။
ညီလည်း သင်တန်းပြီးရင်တော့ စာသင်တဲ့ အတွေ့ကြုံလေး ရေးအုံးမှပဲး)
ကျမလည်း ကိုညီလင်းနဲ့ တသဘောတည်းပါပဲ။ ဗမာပြည်မှာ နေသူတွေ သည်လောက်လွယ်လွယ်နဲ့ မိခင်ဘာသာစကား တတ်ရမယ့်အရေးကို လက်လွှတ်ပစ်တာ ဝမ်းနည်းစရာပဲနော်...နားမလည်ဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ နေသူတွေလည်း အခု ကိုညီလင်း လုပ်သလို ကြိုးစားရင်လည်း ရတာပဲဟာ။ အမှန်ကတော့ ခက်တယ်ဆိုပေမယ့် လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှု မရှိမှု အပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းပြပြ တကယ်လိုချင်တဲ့အရာ တခုအတွက် နည်းလမ်းနဲ့ အချိန်ဆိုတာ အမြဲ ရှာတွေ့တယ်။
နောက်တခုလည်း ကိုညီလင်းနဲ့ တသဘောတည်းပဲ။ မလိုအပ်ဘဲ တခြားဘာသာဝေါဟာရတွေ ညှပ်သုံးတာလေ။ ကျမလည်း ဘလော့ဂ်စရေးကတည်းက မလိုအပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို ညှပ်မသုံးအောင် သတိထားတယ်။ မုန့်ဖုတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ဖြစ် ရေးတဲ့အခါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဒီကအခေါ်အဝေါ်တွေအပြင် ကိုယ်သိသလောက် ဗမာအမည်တွေပါ ရေးပေးတယ်။ yeast တဆေး ဘာညာ စသည်ဖြင့်။ ဒီကအခေါ်အဝေါ်ကို ရေးရတာက ဒီမှာ ရှာဝယ်တဲ့အခါ လွယ်အောင် ရေးရတာ။တချို့အသုံးအနှုန်းတွေ (အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးမပေါင်းတတ်သူတွေတောင် အသံထွက် သုံးနေတဲ့ စာလုံးမျိုးတွေ၊ ကိုယ်က ဗမာလိုရေးရင် တမျိုး ကြီးဖြစ်နေမယ့် ဟာမျိုးတွေကိုသာ ညှပ်သုံးမိရင်သုံးမိမယ်။ သားလေး ဗမာလိုနားလည်တာ သိရတော့ ကိုညီလင်း အားထုတ်မှုကို ချီးကျူးလေးစားမိပါတယ်။ အရင်ပို့စ်တွေလည်း လာဖတ်တယ်နော်။ :)
မြန်မာ ပြည်သားစင်စစ် မွေးလာတဲ့ကလေးက
မြန်မာ ဆိုင်ကဟာကို မစားချင်ရတာနဲ့
ကြားရမြင်ရတာ အသည်းယားလွန်းတယ်အကို ရေ..
လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးနော်။ အဲဒီမလွယ်တဲ့ကြားကပဲ သားသေးကို အခုထိ တတ်မြောက်အောင် သင်ပေးနိုင်တာ ချီးကျူးတယ်။
သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား(စာ)ကိုအပတ်တိုင်းသင်ပေးပြီး အဲတာကိုပဲပြောခိုင်းတယ်
အဲဒီထဲမှာ မြန်မာပြည်ကနေ ဘွဲ့ရပြီးလာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ ကိုညီလင်းရဲ့ သားလေးကိုတော့ တွေ့ဖူးချင်နေတာ ဟိုးး.....အရင်ကတဲကလေ ခုတော့ပိုပြီးတွေ့ဖူးချင်မိပြီ ကံဆုံခွင့်ရခဲ့ရင်နော်
အဖေမြန်မာ၊ အမေမြန်မာက မွေးတဲ့ကလေးတွေဟာ တခြားအကြောင်းပြတွေ မလိုဘဲနဲ့ တို့မိခင်၊ ဖခင်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် မြန်မာစာကို သင်တင့်၊ တတ်သင့်ပါတယ်အစ်ကို။
ဆစ်ဒနီမှာတုန်းက မြန်မာမိသားစုတွေစုပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်ကြတယ်။ ကလေးတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောကြာတာပဲ။ အဲဒီမှာ မိဘအများစုက ကလေးတွေကို မြန်မာလိုပြောပေမယ့် တချို့ (အထူးသဖြင့် အဖေတွေ) က ကိုယ့်သားသမီးကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောနေတာတွေ့ရတယ်။ တကယ်ဆို မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မြန်မာလိုပြောလို့ ဘယ်သူကမှ အထင်သေးမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဇွန်ကသာ ဘာကြောင့်သူတို့မြန်မာလို မပြောရတာလည်းဆိုတာကို စောဒကတက်ချင်နေမိတာ။ ကလေးတွေက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လို့ အင်္ဂလိပ်စကားလည်း တကယ့်သြစီသံနဲ့ ပြောတတ်နေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်မှာလည်း စိတ်မပူရတော့ပါဘူး။ အဲ… ပြောတဲ့အဖေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကသာ သိပ်မကောင်းတာ။ အဲဒီမှာ ကလေးမိဘ (အမေ) တစ်ယောက်နဲ့ ဇွန်စကားပြောကြည့်တယ်။ သူ့သမီးလေးတွေကလည်း အိမ်မှာအဖေနဲ့ဆိုရင် မြန်မာလိုထက် အင်္ဂလိပ်လိုပိုအပြောများတာတဲ့၊ သူနဲ့ကျတော့ သူက ကလေးတွေကို ပြောထားတယ်၊ သမီးတို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် မေမေ နားမလည်ဘူး၊ ဒီတော့ မြန်မာလိုပဲ ပြောပါဆိုပြီးတော့တဲ့။
အစ်ကို့လို အဖေမျိုးက ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇွန်က ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကြုံရင်ကြုံသလို အစ်ကိုတို့မိသားစုအကြောင်း အထင်ကရရှိတဲ့ ဥပမာအနေနဲ့ အမြဲထည့်ပြောလေ့ရှိတယ်။ ကလေးရှိတဲ့ နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အိမ်မှာနေရင် မြန်မာလိုပဲ ပြောပေးဖို့၊ တတ်နိုင်သလောက် မြန်မာစာသင်ပေးဖို့ ဇွန် အမြဲတိုက်တွန်းတတ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်က နယူးဇီလန်ကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာကပြားမိသားစုက မွေးလာတဲ့ကလေးက မြန်မာလို ကောင်းကောင်းပြောတတ်တာကို ဇွန်တွေ့ဖူးတယ် အစ်ကို။ သူ့မိဘနှစ်ပါးလုံး မြန်မာအင်္ဂလိပ် ကပြားတစ်ဝက်စီဖြစ်လို့ အိမ်မှာ မြန်မာလိုရော ဘိုရောပါ ညှပ်ပြောတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကလေးမွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီး အဖေရောအမေပါ အင်္ဂလိပ်လို လုံးဝမပြောတော့ဘဲ မြန်မာလိုပဲ ပြောခဲ့ကြတော့ ကလေးက မြန်မာလူဦးရေမရှိသလောက် အရမ်းနည်းပါးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းရပေမယ့်လည်း မြန်မာလို ကောင်းကောင်းတတ်သွားခဲ့တာပါပဲ။ အဲလိုကလေးမျိုး၊ နောက် အစ်ကို့သားလေးလို ကလေးမျိုးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးလို့လားမသိဘူး မြန်မာပြည်မှာပဲနေပြီး မြန်မာမိဘနှစ်ပါးက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မြန်မာကလေး မြန်မာစာမတတ်တာကို ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်အောင် ဖြစ်နေတာ။
မြန်မာစာကို တတ်ချင်လွန်းလို့ အခက်အခဲတွေကြားက တခုတ်တရနဲ့ သင်ယူနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ဗွီဒီယိုကို ယူကျူဗ်မှာ ကြည့်ရတဲ့အခါတိုင်း ဘာဖြစ်လို့များ မြန်မာဖြစ်တဲ့ တို့လူမျိုးကျမှ မြန်မာစာကို မတတ်ချင်၊ မသင်ချင်၊ မပြောချင်ရတာလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အကြိမ်ကြိမ်မေးမိတယ်။
မြန်မာပြည်က ရှားပါးတိရစ္ဆာန်နဲ့ သစ်တော၊ ဒီရေတောတွေ၊ သယံဇာတတွေ အစဉ်တစိုက် စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းဖို့ အမြော်အမြင်နည်းပါးခဲ့တဲ့ လူတွေကြောင့် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ရသလိုမျိုး မြန်မာစာကို မြန်မာလူမျိုးတွေကြောင့်ပဲ အလွယ်တကူနဲ့ မကွယ်ပျောက်စေချင်ဘူး။
ဒီတော့ အစ်ကိုရေ… လိုဇန်းမြို့မှာရှိတဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီး မပြိုလဲ၊ မယိုင်နဲ့ဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ဇွန်တို့ ၀ိုင်းပြီး ထောက်ကူဖေးမပေးရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် သားသားကိုသင်ပေးဖို့ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ လိုအပ်လာတဲ့အခါ အချိန်မရွေး ဇွန်တို့ကို ပြောပါနော်။ မြန်မာစာအတွက် ဇွန်တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေ ကူညီပေးဖို့ အမြဲအဆင့်သင့်ပါ။း)
ဒီပို့စ်လေး ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် ကိုညီလင်းရေ … ။ မမေလဲ မြန်မာစာဆို “ဟင်” ချင်ကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ကလေးတွေကို သင်နေရတာ တခါတလေ စိတ်ပျက် (စိတ်ဓာတ်ကျ) မိတယ်။ သူတို့လေးတွေကို မြန်မာစာ ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် မမေတို့ (ဆရာ/ဆရာမတွေ) လုပ်ပေးနိုင်တာက စာသင်ခန်းထဲက အချိန်လေး တချိန်လောက်ပါပဲ။ ကိုညီလင်းပြောသလို မိဘတွေက အဓိက အရေးကြီးတာပါ။
အခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ ကလေးတွေက ကိုယ့်စကားနားထောင်ပြီး မြန်မာစာဖတ်နေရင်တောင် မိဘတွေက မြန်မာစာအရေးမကြီးဘူး မအောင်လဲ ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ခေါင်းထဲကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထည့်နေတော့ မခက်ဘူးလား။
သူတို့လေးတွေကို ကိုညီလင်းရဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကိုညီလင်း ခွင့်ပြုမယ် ဆိုရင်ပေါ့။
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ. သားသားကို မြန်မာစကားကျွမ်းကျင်အောင် ပြောတတ်ဖို. သင်ပေးတဲ့စိတ်ကိုတော့ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အများအားဖြင့် ကလေးတွေက မိခင်စကားကို ပိုအားသန်ကြတယ်လေ။ (အမေတွေက သား၊သမီးနဲ. နီးစပ်မှု ပိုရှိကြတာကိုး)။ သားသားကလဲ သားလိမ္မာလေးပါ။ ကြံရင် သားသားရဲ. ထွားလာတဲ့ ပုံလေးတွေလဲ တင်ပေးပါအုန်း။ သားသားပြောတဲ့ ချစ်စဖွယ် ဗမာသံလေးကိုလဲ နားထောင်ကြည့်ချင်မိပါရဲ.။
I have two daughters and they both can speak burmese very well. Unfortunately I could not teach them how to write burmese language. I am still proud of my daughters for speaking burmese language.
မြန်မာပြည်မှာ သားသားနဲ့ဆုံတော့ မမေကထင်တယ်..အရုပ်လေးပြပြီး Do you like it? ဆိုတော့ သားလေးက ကြောင်ကြည့်နေတယ်..။ အဲ့ဒီ့အခါ အစ်ကိုက 'သား ကြိုက်လား တဲ့' သားလေးဘက် ငုံ့ကြည့်ရင်း ပြောတယ်..။ ဒီတော့မှ သားလေးက ခေါင်းခါပြတယ်..။ သူမကြိုက်ပါဘူးပေါ့လေ..။
ညီမတို့တွေ သဘောတကျနဲ့ ရယ်ကြတယ်..ဟယ် မြန်မာလို နားလည်တယ်တော့လို့လည်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ရေရွတ်ကြတယ်..။
ညီမ စိတ်ထဲလည်း ဘယ်လိုကြည်နူးမှုလေးမှန်းမသိအောင် ကြည်နူးရင်းပြုံးနေမိတယ်..။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေး.. သူ့ကို မြန်မာလိုပြောလို့ရတာပဲ..သူ နားလည်တယ်...ကြည့်စမ်း သူပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်လိုက်ရတာ..။
ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့စကားနည်းတဲ့ ညီမက ကလေးကို စကားပြောချင်လာအောင် ချော့မြှုမပြောတတ်ပြန်ဘူး..။
နောက်တော့ အစ်ကိုတို့ စကားပြောတာတွေပဲ လိုက်ကြည့်နေမိတယ်..။
သားနဲ့ ပြောတဲ့အခါတိုင်း မြန်မာလို ပြော ပြောနေတာလည်းသိလိုက်ရတယ်..။ တကယ့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားပါတယ် အစ်ကို...။
ညီမတို့ ရုံးမှာ အဖေမြန်မာ အမေမြန်မာက မွေးတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်က သူ့ကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောမှနားလည်တယ်..။ အင်တာနေရှင်နယ်စကူးမှာ ကျောင်းထားတာကိုး..။
ဒါကို သူ့မိဘတွေက ကလေးက မြန်မာလိုနားမလည်ဘူးရယ်လို့ ဂုဏ်ယူစွာပြောလေ့ရှိတယ်..။
ဒါမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီလိုမျိုးတွေက များသထက် များလာတာပါပဲ အစ်ကိုရယ်...။
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်စောင်ကို ရေးပေးတဲ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်ကို...။
ညီမ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ့မယ်..။
ကလေးတွေဟာ ကွဲပြားမှုတွေ အတူယှဉ်တွဲ ရှိနေတဲ့အကြောင်း အခုအရွယ်ကတည်းက နားလည်စေမှာဖြစ်သလို အခြား ဘာသာစကားတွေကိုလည်း လေးစား၊ တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ ပါပဲ…၊
သိပ်သဘောကျတဲ့ စကားပါပဲ..။ (y)
ဟုတ်ကဲ့ပါ…၊ ကဲ.. အကြွေးတော့ ဆပ်လိုက်ပြီနော်၊း) အမြဲတမ်း မပျက်မကွက်နဲ့ လာအားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ…၊
It's all my pleasure. I am sure you must have been smiling by recalling those memories while reading my post. Well done for your boy…! :)
No, I don't mind. Not at all…! Please do!
Thank you sis! I appreciate your encouragement! :)
ခုလို အားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး ညီမရေ…၊း)
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်ကတော့ မိဘတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ပါပဲ၊ မြန်မာစကားကိုဘာ့ကြောင့် လေးစား၊ တန်ဖိုးထားရမယ် ဆိုတာ မိဘတွေက အရင်သိမှ ကလေးတွေကို ပြန်ပြောနိုင်မှာ မဟုတ်လား၊ အခုတော့ဖြင့်…၊
Thanksalot! Yes, please do as you wish! :)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ကလေးတွေကို မြန်မာစကား ပြောတတ်စေဖို့ မိဘတွေက တကယ်ပဲ အခရာ ကျပါတယ်…၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ…၊ အစ်မတို့ မိသားစုလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားပြည့်နဲ့အတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်…၊
ညီကတော့ အချင်းချင်းတွေကို လုပ်နေပြန်ပြီ၊း) မတော်ပါဘူးဗျာ၊ ဒီလိုပဲ လုပ်နိုင်တာလေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်နေတာ…၊ ဟုတ်ပြီ…၊ သင်တန်းပြီးအောင် မစောင့်နဲ့လေ၊ အခုကိုပဲ ရေးလို့ ရနေပြီ မဟုတ်လား..၊း)
သိပ်မှန်တာပေါ့ဗျာ၊ တကယ်လိုချင်ရင် နည်းလမ်းနဲ့အချိန် ဆိုတာ အမြဲရှာတွေ့တာပဲ၊ တကယ့်ကို သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာစကားကို တမင်မပြောဘဲနေတာဟာ ဘယ်လောက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုလဲဆိုတာ သူတို့ တချိန်ကျ သဘောပေါက်မှာပါ…၊
အင်းလေ… ဒါတွေက ဖက်ရှင်တခုလိုတောင် ဖြစ်လာနေတဲ့ သဘောများလား မသိဘူးနော်…၊
မလွယ်တာတော့ တကယ့်ကို မလွယ်တာဗျ…၊း) တခါတခါ အတော့်ကို ပင်ပန်းတယ်…၊း)
အင်း… သူတို့လည်း မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိတုန်းက လူမျိုးစု ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ဗျာ…၊ ပိတ်ပင်တဲ့အထိ ဆိုရင်တော့လည်း သိပ်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့လေ…၊
Wow… တခါမှမရေးစဖူး ကွန်မန့်အရှည်ကြီးနဲ့…၊း) ပို့စ်တပုဒ်တောင် လုပ်လို့ရတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဇွန်ပြောသွားတာတွေ အားလုံးကို သဘောတူတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့များ တချို့တွေက အဲဒီလို တလွဲဆံပင် ကောင်းချင်နေရတာလဲ မသိဘူးလို့ တခါတလေ တွေးမိတယ်၊ မွေးရာပါ ရလာတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခွင့်အရေးတရပ်ကို အကြောင်းမဲ့ ဖြုန်းတီးပစ်ချင်ကြတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ၊ သင်ထောက်ကူအတွက်လည်း ကျေးဇူး…၊ စိတ်ချ..၊ နောင်မှာ လိုကို လိုမှာ၊ အဲဒီအခါ ပြောမယ်နော်…၊း)
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…၊ ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်နော်…၊
အဲဒါကတော့ ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ…၊ ကလေးကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရမယ့်အစား အခုတော့ မိဘကိုယ်တိုင်က လွဲမှားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ သွင်းပေးနေတာ…၊ စိတ်မပျက်ဘဲ တတ်နိုင်သလောက် သူတို့လေးတွေကို သင်သာ သင်ပေးပါ မမေရာ၊ ဒီဆောင်းပါးကိုလည်း မမေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ့်နေရာတိုင်းမှာ ကြိုက်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်…၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော်လည်း အဲဒါမျိုး ကြားဖူးတယ်၊ အမေတွေရဲ့ စကားကို ကလေးတွေက ပိုတတ်လွယ်တယ် ဆိုတာ၊ သားရဲ့ ဓာတ်ပုံတော့ ရှေ့လာမယ့် ပို့စ်တခုခုမှာ တင်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်၊ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ အသံဖိုင် လုပ်ဖို့လည်း ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်၊ ကွန်မန့် အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်…၊
Canada က စာချစ်သူ…
There is no doubt that you are proud of your smart daughters. :) Let alone writing, being able to speak Myanmar language is already great for those living abroad. Good job! :)
ညီမက မှတ်ဥာဏ် ကောင်းလိုက်တာ…၊ အခုမှ ကျနော်လည်း ပြန်မှတ်မိလာတယ်၊ ဟုတ်တယ်…၊ အဲဒီလို ပြောနေကြတာကို ပြန် အမှတ်ရသွားပြီ၊း) အင်း… ဂုဏ်မယူသင့်တဲ့ နေရာမှာ တလွဲတွေ ဂုဏ်ယူနေကြတာ သေချာတွေးကြည့်ရင် ရှက်စရာ ကောင်းသလို အဲဒီလို တလွဲဂုဏ်တွေကို မြင်နေတဲ့ ကလေးအဖို့လည်း မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ စာအုပ်စာတမ်း အကူအညီအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ ညီမသူသူရေ…၊ လိုအပ်ရင် ပြောမယ်နော်၊ နောက်ထပ် ကွန်မန့်တခုနဲ့ သီးသန့် ထပ်ပြီး အားပေးတဲ့အတွက်လည်း ဒုတိယမ္ပိ ကျေးဇူး…။း)
အမေရိကန်မှာ နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ သူ့သားကို အမြဲ မြန်မာလိုပဲ ပြောတယ်။ သားက နားတော့လည်တယ် ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြန်ပြောတယ်။ အမေကလည်း ပေကပ်ပြီး မြန်မာလိုပဲ သားကို ပြောတယ်။
သားအမိ နှစ်ယောက် စကားပြောရင် တခြမ်းစီ ဖြစ်နေတဲ့ လွဲချော်မှုလေးက အခုတော့ တည့်မတ်သွားပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကားသွားတော့ မိန့်ခွန်းတခုမှာ မြန်မာလို ပြောရမယ်လို့ ပြောလိုက်ကတည်းက သူ့သားက မြန်မာလို ကြိုးစားပြောတော့တာပါ တဲ့။
၁၅နှစ်ကြာ နားရည်ဝထားတော့ ကလေးကိုယ်တိုင်က ပြောချင်တဲ့စိတ်လေး ထည့်လိုက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားပါတော့တယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ မိန့်ခွန်း..:P အဲ..ပို့စ်ကြောင့်လည်း ထွက်ပေါ်လာမည့် ကလေးတို့ရဲ့ မြန်မာစကားသံလေးတွေကို ကြိုဆိုရင်း...
ကိုညီလင်းကိုတော့ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဘူး...မြန်မာမိဘ မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာစကား မပြောတတ်တဲ့ကလေးတွေ တွေ့ ရတာ ဝမ်းနည်းစရာပဲ..
ကိုညီလင်း ရဲ့ စာတွေအမြဲဖတ်တဲ့ သူပါ..ကျမရဲ့ သားကိုလည်း အမြဲကိုယ့်ဘာသာစကားပဲ ကြိုးစားပြီး ပြောပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ကျောင်းမှာသင်ယူရတာက ၃ ဘာသာ ၊ အိမ်မှာ ကသူ့ အဖေ နဲ့အမေ က တဘာသာစီ ဆိုတော့ ၅ ဘာသာကို သူလက်ခံ နေ ရတော့ လေ အခုသားက နားလည်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ပဲပြန်ပြော တော့တယ်..ကျမ သားက ကိုညီလင်းသားထက် တစ်လကြီးပါ တယ်..အစ်ကို့ကိုအားကျတယ်..သူ့ အဖေကစကားနဲ တာလည်းပါမှာပေါ့လေ..
ကိုညီလင်းရေ ကျွန်မလဲ ကလေးတွေကို မြန်မာမိဘက မွေးလာပြီး မြန်မာစကား မပြောတတ်၊ မြန်မာစာ မတတ်မှာ စိုးရိမ်မိတဲ့ အမေ တစ်ယောက်ပါ။ အဖေရော အမေပါ မြန်မာဖြစ်လျက်သားနဲ့ သမီးလေးတွေ မြန်မာစာမတတ်ဘူး ဆိုတဲ့အဖြစ်ကို လက်မခံနိုင်လို့ ကြိုးစားပြီးသင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မှန်မှန်မသင်ဖြစ်တော့ သူငယ်တန်းကနေ ၁ တန်းဖတ်စာအုပ် တက်လိုက်၊ မေ့လိုက်၊ သူငယ်တန်းပြန်ဆင်းလိုက်နဲ့ပါပဲ။ ဒီနှစ် မြန်မာပြည်ပြန်တော့ သမီးတွေဖတ်နိုင်မယ့် စိတ်ဝင်စားမယ့် စာအုပ်လေးတွေ သွားတွေ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးချိုချိုအနုပညာ စာပေက ထုတ်တာပါ။ ခေတ်ဘုန်းသစ် ရေးပါတယ်။ ကလေးကြိုက်ဖတ်စာ ဆိုပြီး သူငယ်တန်းသင်ခန်းစာတွေအလိုက် ခွဲထားပေးတာပါ။ ကလေးတွေပျော်ပြီး ဖတ်ကြတယ်။ ကိုညီလင်းရဲ့ သားလေးအတွက် မြန်မာပြည်ကမှာလို့ရအောင် ပြောပြတာပါ။
Bravo Ko Nyi Linn Thit :)
Whatathoughtful farther, Ko Nyi.
I always love to read your post and your posts always give somethings to the reader.
I respect you. Always gives something for the reader to remember. Good job....
let me share on FB
အားကျပါတယ် ။ ကျနော်လည်း သမီး ၂ ယောက်ကို မြန်မာပြည် အလည်ခေါ်ပြီး ကလေးချင်း အပြန်အလှန် ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစား မလို့ ။
Ma Win Myint said...
I like so much this post specially. Let me share please. Thank you.
Khin Hla Aung said...
မိပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စားနေတဲ့
အနှုန်းနဲ့မြန်မာလိုအသုံးအနှုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြ ခြားနားပြ
ပေမယ့်လည်း တချို့မြန်မာလူမျိုးမိဘတွေက လုံးဝ သဘော
ကြည်ချက်ကိုလည်းဘယ်လိုမှမစွန့်လွှတ်နိုင်ပြန်တော့ တွေ့ ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအတွက် စိတ်ပျက်မိပေမယ့်လည်း